မတျ 5, 2019 – Healthy Life Journal
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူတချို့အတွက် အစာခြေလမ်းကြောင်း မအီမသာဖြစ်ရတာက တစ်ခါတလေလောက်ပဲ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် တချို့လူတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို လေထတာ၊ လေပွတာ၊ ဗိုက်နာဗိုက်အောင့်တာ စတာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကျန်းမာပြီး လေပွ၊ လေထတာနဲ့ ဗိုက်နာဗိုက်အောင့်တာ ကင်းဝေးစေဖို့အတွက် လိုက်နာသင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေ...
မေး. အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ပါတယ်ရှင်။ လူတစ်ကိုယ်မှာ အဆုတ်ရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာပြပါသလဲရှင်။ Aye Myat Mon(FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အဆုတ်ရောဂါဆိုတာ အများကြီးရှိပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် အဆုတ်ဆိုတာ အသက်ရှူသွင်း/ရှူထုတ်ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်စွန့်ထုတ်ပြီး...
ကလေးငယ်၏ မျက်နှာပေါ်ရှိ မွေးရာပါ အကျိတ်ကြီးကို အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့
၊ ကိုထက် ၊ မျက်နှာပေါ်မှာ မွေးရာပါ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အကျိတ်ပါလာခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲလေးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ပြုံးရွှင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ဗလီကာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက သူမရဲ့တတိယမြောက်ရင်သွေးငယ်လေးကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။...